“Avy amin’ny fomba fijerin’ny andrim-panjakana sy ny Fanjakana ny teny hoe ‘indizeny’ “ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jona 2018 4:45 GMT
Mpikambana ao amin'ny ekipan'ny fandaharana isan-kerinandro “Descolonizar el Coco” ao amin'ny Wambra Radio any Quito, Ekoadaoro i Sebastián Terán. Dika an-tsoratra tamin'ny lahatsary momba ny fanadihadiaa nataon'i Sebastián momba ny zavon-teny manondro ny voambolana “indígena” (indizeny) ao anatin'ny tontolon'ny Ekoadaoreana ity manaraka ity.
Ireo teny mibahan-toerana avy amin'ny lahatsoratra miisa 1.599 izay navoaka teo anelanelan'ny volana Janoary 2017 sy Aprily 2018 milaza ny hoe “indígena” (indizeny) ao anatin'ny angona Media Cloud amin'ny seha-pampitam-baovao 2 amin'ny teny Espaniola ao Ekoadaoro. (jereo ny sary lehibe kokoa)
Aseho avy amin'ny fomba fijerin'ny andrim-panjakana sy ny Fanjakana ny teny hoe ‘indizeny’, indrindra amin'ny fotoan'ny fifidianana izay hanatanterahana ny fepetra demokratika, ny fiaraha-miasa ary ny fandraisana anjara. Izany no mahatonga antsika mahita ny teny toy ny hoe ‘filoha,’ ‘fikambanana,’ ‘governemanta,’ ‘firenena,’ ‘mpitarika,’ ary ‘ CONAIE‘ (Ny Konfederasionan'ny Zom-pirenena Indizeny ao Ekoadaoro).